Ndị ahịa ọ kwesịrị ikwenye na nkeonwe? | Martech Zone
Bọchị Sọnde, Machị 29, 2020 Bọchị Sọnde, Machị 29, 2020 Garin Hobbs
Akwụkwọ akụkọ Gartner na nso nso a kọrọ:
Ka ọ na-erule afọ 2025, 80% nke ndị na-ere ahịa etinyegoro onwe ha ga-ahapụ mbọ ha.
Amụma 2020: Ndị na-ere ahịa, Ha Adabaghị na Gị.
Ugbu a, nke a nwere ike iyi obere echiche, mana ihe na-efu bụ ihe gbara ya gburugburu, echekwara m na ọ bụ nke a…
Ọ bụ eziokwu zuru ụwa ọnụ na-atụle nsogbu nke ọrụ n'ihe metụtara ngwaọrụ na akụrụngwa dị na mmadụ. Dịka ọmụmaatụ, iji olulu mmiri na-egwu olulu bụ ihe nhụsianya na-enweghị atụ karịa na azụ azụ. N’ụzọ yiri nke ahụ, iji ihe mgbe ochie, usoro data data ochie na ihe nzipu ozi iji chụpụ atụmatụ onwe gị dị oke ọnụ ma sie ike karịa ka ọ chọrọ. Echiche a yiri ka ọ kwadoro eziokwu ahụ bụ na, mgbe a jụrụ ya, ndị ahịa kwuru, enweghị ROI, ihe ize ndụ nke njikwa data, ma ọ bụ ha abụọ, dị ka isi ihe mere ha ji ada mbà.
Ọ bụghị ihe ijuanya. Nhazi nke onwe siri ike, na otutu ihe kwesiri ịzukọ na nchịkọta egwu maka ịme ya ma ọfụma ma ọfụma. Dị ka ọ dị n'ọtụtụ akụkụ azụmaahịa, igbu azụmaahịa azụmaahịa na-aga nke ọma site n'okporo ụzọ atọ dị mkpa; Ndị mmadụ, Usoro, na Teknụzụ, na nsogbu na-ebilite mgbe ihe ndị ahụ mebere — ma ọ bụ enweghị ike - na-eso otu.
Nhazi onwe: Ndi mmadu
Ka anyi malite ndị mmadụ: Nhazi onwe onye bara uru ma bara uru na-amalite site n'inwe ezi ebumnuche, itinye onye ahịa n'etiti etiti akụkọ bara uru. Onweghi oke AI, nyocha amụma ma ọ bụ akpaaka nwere ike dochie ihe kachasị mkpa na nkwukọrịta: EQ. Yabụ, ịnwe ndị ziri ezi, nwee echiche ziri ezi, bụ ntọala.
Ọzọ, ka anyị lelee usoro. Usoro mkpọsa dị mma kwesiri ichebara ebumnuche, ihe achọrọ, ntinye, na oge nke onye nyere aka ọ bụla, ma kwe ka ndị otu rụọ ọrụ n'ụzọ ha ji atụkwasị obi, nwee ntụsara ahụ ma rụọ ọrụ. Mana a na-amanye ọtụtụ ndị na-ere ahịa imebi iwu, na-achọpụta usoro ha machibidoro ma kwuo site na adịghị ike nke ngwa ahịa na nyiwe ha. Usoro kwesịrị ijere ndị otu ahụ ozi, ọ bụghị nke ọzọ.
Nhazi onwe ya: Teknụzụ
N'ikpeazụ, ka anyị kwuo banyere ya Technology. Ulo oru ahia gi na ihe oru gi kwesiri ibu ihe zuru oke, nke gha eme ka o buru ibu. Nhazi onwe onye choro ndi ahia ahu mara ndị ahịa ha, na ebe ọ maara ndị ahịa gị chọrọ data… ọtụtụ data, site n'ọtụtụ ebe, anakọtara ma na-emelite mgbe niile. Nanị inwe data ahụ ezughị ezu. Ọ bụ ikike iji nweta ngwa ngwa ma wepụ ihe ngosi nwere ike ịkọwapụta na data nke na-enye ndị ahịa ohere ịnyefe ozi nke ahaziri iche nke na-ejigide ngwa ngwa na ọnọdụ nke ahụmịhe ndị ahịa taa.
Ọtụtụ n'ime ndị kasị mara na tụkwasịrị obi nyiwe na-agbasi mbọ ike ịchọta ihe a na-achọwanye na-achọ ịma aka nke oge a. Data echekwara na akụkụ ntọala ochie (mmekọrịta ma ọ bụ ihe ọzọ), siri ike karịa (na / ma ọ bụ ọnụ) ịchekwa, ogo, melite na ajụjụ karịa data na akụrụngwa na-abụghị nke ekwenti, dị ka nhazi.
Imirikiti nyiwe izizi ihe nketa na-eji nchekwa data dabeere na SQL, na-achọ ka ndị ahịa mara SQL, ma ọ bụ na-amanye ha ịhapụ njikwa nke ajụjụ ha na nkewa na IT ma ọ bụ Injinia. N'ikpeazụ, usoro ntanetị ndị a na-emelite data ha site na ETL na abalị na ume ọhụrụ, na-egbochi ikike ndị na-ere ahịa iji zipu ozi dị mkpa na oge.
N'ụzọ dị iche, nyiwe nke oge a dịka Ezigbo, jiri usoro data NoSQL nwere ike ịbawanye, na-enye ohere maka iyi data na njikọ API site na ọtụtụ isi mmalite n'otu oge. Datadị data dị otú ahụ dị ngwa ngwa nkewa ma dị mfe iji nweta ihe nrụpụta nke onwe, na-ebelata oge na ohere ohere nke iwulite na ịmalite mkpọsa.
Wuru n'oge na-adịbeghị anya karịa ndị na-asọmpi ha, ọtụtụ n'ime nyiwe ndị a na-agụnye ma ọ bụ na-akwado ọtụtụ ọwa nkwukọrịta, dị ka email, ịkwanye mkpanaka, in-app, SMS, ihe nchọgharị, mmegharị mmekọrịta na ozi ziri ezi, na-eme ka ndị ahịa nwee ike ịnapụta n'ụzọ dị mfe otu usoro nke ahụmịhe ka ndị na-azụ ahịa na-emegharị ahụmịhe ha gafee ọwa akara na ntụpọ.
Ọ bụ ezie na azịza ndị a nwere ike ime ka usoro ihe omume dị mfe ma belata oge azụmaahịa, nnabata dị nwayọ nwayọ n'etiti ndị toro eto ma ọ bụ ndị dị ogologo oge, bụ ndị ọdịnala na-agbanwe agbanwe ma na-eleghara anya. N'ihi ya, ọtụtụ n'ime uru agbanweela ọhụrụ ma ọ bụ abụrụ ụdị na-ebu obere nketa oru ibu ma ọ bụ obi trauma.
Ndị ahịa agaghị enwe ike ịhapụ atụmanya ha bara uru, mma na ahụmịhe oge adịghị anya. N’ezie, akụkọ ihe mere eme na-akụziri anyị na atụmanya ndị ahụ ga-akawanye njọ. Hapụ usoro ịhazi onwe gị enweghị isi na ahịa juru ebe niile, n'oge ebe ahụmịhe ndị ahịa bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ohere kachasị mma nke ọrịre ọ bụla iji wepụta ma gosi ọdịiche dị na akara ha, ọkachasị ebe enwere ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ nwere ike isi dị.
Ndị a bụ nkwa ise ndị ahịa na ụlọ ọrụ ha nwere ike ime iji nyere ha aka site na mgbanwe na-aga nke ọma:
Kọwaa ihe ahụmahụ ị chọrọ ịnapụta. Ka nke ahụ bụrụ ebe compass nwere maka ihe ndị ọzọ niile.
Na-ekweta na mgbanwe dị mkpa na eme ya.
Nyochaa ihe ngwọta nke pụrụ ịbụ ihe ọhụrụ ma ọ bụ nke a na-amaghị ama.
Kpebie na ụgwọ ọrụ nke ihe si na ya pụta karịrị ihe egwu.
Ka ndị mmadụ kọwaa usoro; ka usoro ịtọ ntọala nke teknụzụ.
marketers nwere igwu olulu, ma i meghi nwere iji otu ngaji.
Rịọ ihe ngosi ngosi
Tags: aputaNhazi nke ahiakeonweịhazi ire ahịa
Garin bụ Director nke Deal Strategy na Ezigbo, ikpo okwu na-enye ndị na-ere ahịa B2C ikike ịchịkwa usoro izipu ozi obe ha site na iji usoro data dị ngbanwe na nke nwere ike ịkọwa ihe iji gwa ọwa 1: 1 mkparịta ụka site na email, ekwentị mkpanaaka, ntanetị na ntanetị.